Fonon-tànana vita amin'ny hoditr'ondry China Ladies miaraka amina zipper ao ambadiky ny mpanamboatra sy mpamatsy | Fanshen
Fonon-tànana vita amin'ny hoditr'ondry miaraka amin'ny zipper ao aoriany
Vita amin'ny hoditry ny ondrilahy malefaka sy mateza, miaraka amina voasarim-bola, ary ny lamosin'ilay mandry amin'ny zipper, ravin-kazo ravina Willow roa, tena marani-tsaina sy mahafinaritra. manomeza fahatsapana tsara mandritra ny fotoana maro manomboka amin'ny mahazatra ka hatramin'ny akanjo!
● Fitaovana: hoditra tena izy 100%
● Fanaronana: firakofana volon'ondry
● Loko: loko mainty, mena ary loko hafa
● Size: S / 6.5, M / 7, L / 7.5, XL / 8
● OEM: Ie
Previous: Fonon-tànana vita amin'ny hoditr'ondry miaraka amin'ny haingo vita amin'ny hoditra
Manaraka: Fonon-tànana vita amin'ny hoditr'ondry misy fanjairana mifangaro
1. Tombony toerana, ny orinasako dia any amin'ny faritanin'i Hebei, mila adiny 3-4 eo ho eo mankany amin'ny seranan-tsambo any Beijing. Manodidina ny 5-6 ora mankany amin'ny seranan-tsambo any Tianjin amin'ny fiara, mety be amin'ny fandefasana azy io. Ary Hebei Provinc koa dia toby indostrialy ho an'ny famokarana hoditra ondry any Shina. Tanànan'ny renivohitra Xinji hoditra sy tanàna volom-borona Daying, dia ao amin'ny Faritanin'i Hebei avokoa.
2. Fahaiza-manao famokarana lehibe Famatsiana maharitra. Araka ny fepetra takian'ny mpanjifa, manohana ny fonosana namboarina izahay. Ary koa ny mpanao asa tanana tsirairay dia manana traikefa mihoatra ny 10 taona amin'ny fonon-tànana vita amin'ny hoditra.
3. QC.Mihoatra ny tem taona niainany ny fanondranana, ny orinasanay dia manana rafitra feno setroka QC. Ny ekipanay QC dia hanamarina ny fividianana fitaovana, ny famokarana, ny fonosana ny fizotran-javatra rehetra.
4.Design.Manana ekipa matihanina manana traikefa manan-karena amin'ny famolavolana sy ny famokarana fonon-tànana vita amin'ny hoditra isika. Lazao anay fotsiny ny hevitrao na alefaso aminay ny sary misy vahaolana avo lenta, izahay dia hanampy amin'ny fanatanterahana ny fonenanao ho fonon-koditra vita lafatra. Ary mitovy amin'ny marika famantarana sy marika anao koa.
Vehivavy fonon'ondry mainty
Vehivavy fonon'ondry tsy misy rantsana
Fonon-tànana hoditra ho an'ny vehivavy
Fonon-tànana mitondra hoditr'ondry vehivavy miaraka amina tanana
Fonon-tànana vita amin'ny hoditr'ondry misy fanjairana mifangaro
Fonon-tànana vita amin'ny hoditr'ondry misy andiany 2 ...